71031 Marvel စတူဒီယိုမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
71031 Marvel စတူဒီယို
Lego ကောလာဟလ Marvel Sanctum Sanctorum set detailed
11 / 06 / 2022 11 / 06 / 2022 Jack Yates 109 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76205 Gargantos Showdown, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ ဖတ်ပြီးသားမိ 3
ကောလဟာလ LEGO အတွက် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ Marvel Sanctum Sanctorum model, including the potential layout of the building have been reported.
အဆိုပါ Lego Marvel Multiverse of Madness တွင် Doctor Strange အတွက် သင်လိုအပ်မည့် အရုပ်သေးသေးလေးများ
30 / 04 / 2022 01 / 05 / 2022 Jack Yates 230 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, 76205 Gargantos Showdown, အမေရိကား ဗေ့စ်, Baron Mordo, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Marvel, Marvel, Scarlet စုန်းမ ဖတ်ပြီးသားမိ 2
Multiverse of Madness မှ Doctor Strange သည် တစ်ပတ်မပြည့်သေးပါ၊ LEGO ကို စုဆောင်းပြီးပါပြီ။ Marvel သေးသေးလေး
နယူး Marvel စတူဒီယိုရဲ့ Ms. Marvel ပိုစတာ ထွက်လာတယ်။
19 / 04 / 2022 19 / 04 / 2022 Jack Yates 182 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Disney+, Lego, Lego Marvel, Marvel, ဒေါ်။ Marvel ဖတ်ပြီးသားမိ 1
ပိုစတာတစ်ခု Marvel စတူဒီယိုရဲ့ Ms. Marvel on Disney+ ပါဝင်သော ပါ၀င်သည့် ရက် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
2022 ခုနှစ်၏ Toy of the Year ဆုပေးပွဲ၌ LEGO သည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်။
19 / 02 / 2022 19 / 02 / 2022 Chris Wharfe 401 Views စာ0မှတ်ချက် 10280 ပန်းပန်းစည်း, 18 +, 31119 ကူးတို့ဘီး, 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, 41684 သူartအင်းအိုင် City ဂရန်းဟိုတယ်, 43193 Ariel Belle စင်ဒရဲလားနှင့် Tiana ၏ပုံပြင်စာအုပ်စွန့်စားမှု, 71031 Marvel စတူဒီယို, Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Disney, Friends, Lego, Lego ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, Lego Disney, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego Marvel, Lego Minifigures, Lego Star Wars, Lego စူပါမာရီယို, Marvel, Moose ကစားစရာ, PLAYMOBIL, Star Wars, စူပါမာရီယို, အဆိုပါ LEGO Group, တစ်နှစ်တာ၏ကစားစရာ, 2022 ခုနှစ်၏ကစားစရာ, တစ်နှစ်တာဆု၏ကစားစရာ ဖတ်ပြီးသားမိ 1
အဆိုပါ LEGO Group Toy of the Year 2022 တွင် ကြီးကြီးမားမားဆုများ ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ခုနစ်ဆု ရရှိခဲ့သည်။
2022 အတွက် LEGO Collectible Minifigures အစီအစဥ်အကြောင်း နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များ – နံပါတ် Marvel ဒါမှမဟုတ် Mario?
12 / 01 / 2022 12 / 01 / 2022 Chris Wharfe 998 Views စာ3မှတ်ချက် အသက် 71011 စီးရီး 15, အသက် 71013 စီးရီး 16, 71031 Marvel စတူဒီယို, အသက် 71032 စီးရီး 22, 90th နှစ်ပတ်လည်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Instagram ကို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego Minifigures, Lego ကောလာဟလ, Lego စူပါမာရီယို, LEGO.com, Marvel, သေးသေးလေး, ကောလာဟလများ, စူပါမာရီယို, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Muppets ဖတ်ပြီးသားမိ 2
LEGO Collectible Minifigures စီးရီးတွင် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ ယခင်ကောလဟာလများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ရောက်ရှိလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဒုတိယ Lego Marvel Collectible Minifigures စီးရီးထွက်ရှိမည့်ရက်စွဲ
09 / 01 / 2022 09 / 01 / 2022 Jack Yates 628 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, အသက် 71032 စီးရီး 22, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ ဖတ်ပြီးသားမိ 1
ကောလဟာလထွက်နေသော ဒုတိယ LEGO အတွက် ဖြန့်ချိမည့်ရက်စွဲ Marvel Collectible Minifigures စီးရီးများကြား တစ်နှစ်တာ အချိန်ကွာဟချက်ကို အကြံပြုသည်။
Forest Elf မှ Snow Guardian အထိ LEGO Collectible Minifigures အသစ် 12 ခု ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
01 / 01 / 2022 20 / 12 / 2021 Chris Wharfe 502 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71031 Marvel စတူဒီယို, အသက် 71032 စီးရီး 22, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, သေးသေးလေး, စျေးဝယ်, အဆိုပါ LEGO Group ဖတ်ပြီးသားမိ 1
LEGO Collectible Minifigures အသစ် ၁၂ ခုကို 71032 စီးရီး 22 တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လိုင်စင်မရှိသော ပထမဆုံးသော အိတ်စွပ်ထားသော လိုင်းကားများကို XNUMX စီးရီး XNUMX တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
LEGO Collectible Minifigures 71032 စီးရီး ၂၀ ကိုရနိုင်သည်
01 / 01 / 2022 20 / 12 / 2021 Chris Wharfe 366 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71031 Marvel စတူဒီယို, အသက် 71032 စီးရီး 22, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, သေးသေးလေး, စျေးဝယ်, အဆိုပါ LEGO Group ဖတ်ပြီးသားမိ 1
LEGO Collectible Minifigures ၏နောက်ဆုံးပေါ်မျက်ကန်းအိတ်စွပ်ထားသောအသုတ်သည်ယခုအခါတွင်အွန်လိုင်းနှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါပြီ၊ အခြား 12 ခု၊
Brick Fanatics' 10 ခုနှစ်၏ ထိပ်တန်း LEGO 2021 စုံ
27 / 12 / 2021 27 / 12 / 2021 Chris Wharfe 896 Views စာ2မှတ်ချက် 10278 ရဲစခန်း, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City သငေ်္ဘာကျင်း, 71031 Marvel စတူဒီယို, 71738 Zane ရဲ့ Titan Mech တိုက်ပွဲ, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 75288 ကို AT-AT, 75313 ကို AT-AT, 76052 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batcave, 76178 နေ့စဉ် Bugle, 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile, 76238 Classic တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ Batman သားလေး, 80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော်, Batman, Black Falcon, ဓါးရွက်, ရဲတိုက်, တရုတ်နှစ်သစ်ကူး, တရုတ်ရိုးရာပွဲတော်, Clemens Fiedler, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Creator Expert, Daredevil, Disney+, Doc Ock ပါ, သစ်တော, အစိမ်းရောင် Goblin, Ideas, Lego, Lego Batman, Lego ရဲတိုက်, Lego တရုတ်နှစ်သစ်ကူး, Lego တရုတ်ရိုးရာပွဲတော်, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego Marvel, Lego Minifigures, Lego modular အဆောက်အ ဦး များ, Lego Ninjago, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, LGBTQIA +, Marvel, မဲ Ashton, သေးသေးလေး, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, နင်ဂျာဂို, NINJAGO အမွေအနှစ်, ပင့်ကူဟမ်း, Spider-Man, Star Wars, Star Warsဖြေ, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Mandalorian, အပြစ်ပေးသူ, SCU, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, သုံးသပ်ချက် 2021 ခုနှစ် ဖတ်ပြီးသားမိ 12
မတူကွဲပြားမှုကို ဂုဏ်ပြုသည့် ပြကွက်တစ်ခုမှ ရူပဗေဒကို ဆန့်ကျင်ပုံရသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုအထိ၊ ဤသည်မှာ၊ Brick Fanatics'ထိပ်တန်း LEGO အစုံ ၁၀